Isitatimende se-invoyisi - Micro-Semiconductor.com
Bathandekayo bonke abasebenzisi, nizothola i-invoyisi yethu esemthethweni yokuhweba ngemuva kokuthenga kwa-Micro-Semiconductor.com, sicela ufunde ngokucophelela imiyalo engezansi.
1, Ukufundiswa kwe-invoyisi ekhishiwe
I-invoyisi izokhishwa ivela ku-Micro-Semiconductor.com. Inani le-invoyisi lizoba ngaphansi kwenani lenani olikhokhile.
I-Micro-Semiconductor.com inikela ngezinhlobo ezimbili zama-invoyisi, i-invoyisi ye-VAT (i-nondeductible) ne-invoyisi ekhethekile ye-VAT (iDeductible).
Ukuze uthuthukise ukusebenza kahle kokusebenza futhi uvikele umphumela wokubuya, i-invoyisi izokhishwa ezinsukwini zokusebenza eziyi-5 ngemuva kokuthi abasebenzisi bathole izimpahla.
Sicela ugcwalise ikheli elifanele, umuntu oxhumana naye, inombolo yocingo ukuqinisekisa ukuthi ama-invoyisi angathunyelwa ngqo. Uma ungalugcwalisi lolu lwazi, i-Micro-Semiconductor.com izothumela i-invoice ekhelini elifanayo nezimpahla ezithunyelwe, ukuze sikwazi ukuxhumana nawe ngesikhathi.
2, irisidi ye-VAT
I-Micro-Semiconductor.com ivame ukukhipha i-invoyisi ye-VAT yabasebenzisi abangabakhokhi bentela jikelele.
Sicela ubhale igama elifanele lenkampani kanye nemininingwane yentela ngaphakathi kwe-invoyisi.
3, i-invoyisi ekhethekile ye-VAT
Uma udinga ukukhipha "i-invoyisi ekhethekile ye-VAT", sicela uxhumane ne-accounting yethu, ngaphandle kwalokho uhlelo lwe-Micro-Semiconductor.com luzokhipha i-invoyisi ye-VAT.
Sicela ugcwalise bese uhlola ngokucophelela ngayo yonke imininingwane ye-invoyisi, i-Micro-Semiconductor.com ngeke ithathe umthwalo uma kukhona iphutha.
Irisidi ekhethekile ye-VAT izothunyelwa nge-express ngemuva kokuqinisekisa ukuthunyelwa.
Sicela ugcwalise igama lenkampani, ikheli, inombolo yocingo, inombolo yentela, igama lasebhange ne-akhawunti, ikheli lokuthumela i-invoyisi, ukuze abasebenzisi bakwazi ukusebenzisa i-invoyisi ekhethekile ye-VAT ngokujwayelekile, kepha yonke imininingwane egcwele kufanele ifane nokukhokha intela.
Igama lenkampani kufanele kube igama lokubhaliswa kwezimboni nezentengiso.
Ikheli lenkampani nenombolo yocingo ye-invoyisi kumele kufane nemininingwane yenkampani yakho.
Inombolo yokubhalisa yentela iyinombolo evuliwe <>, Izinombolo eziyi-15 ngokuvamile, sicela uhlole ngokucophelela bese ufaka.
Igama lebhange nenombolo ye-akhawunti kufanele kubhalwe kuzo, zombili.
Uma abasebenzisi babhala imininingwane engalungile ye-invoyisi ekhethekile ye-VAT, khona-ke i-Micro-Semiconductor.com izokhipha i-invoyisi ye-VAT ngokuzenzekelayo, futhi ngaphandle kokubuyiselwa.
I-Micro-Semiconductor.com ngeke isamukele isicelo sokukhipha kabusha i-invoyisi ekhethekile ye-VAT, uma ngabe sesivele sikhiphe i-invoyisi ngokwemininingwane yabasebenzisi.
5, isikhumbuzi esinobungane
Uma ungabaza nge-invoyisi ekhishiwe, sicela uxhumane nomnyango wezezimali we-Micro-Semiconductor.com.
Uma ungatholi i-invoyisi ezinsukwini ezingama-30 ngemuva kokuthola izimpahla, pls xhumana nesevisi yamakhasimende e-Micro-Semiconductor.com. Ngeke sikhiphe i-invoyisi okwesibili uma ungakwazi ukuxhumana nathi ezinsukwini ezingama-90 (kusukela ngedethi ye-oda)
Igama lomkhiqizo ku-invoyisi kuzoba ukubhala izinto ze-elekthronikhi, inombolo yengxenye kuzoba ukubhala njenge-oda langempela, asikho esinye isicelo esikhethekile.
6, ukubuya kwe-invoyisi
Sicela uxhumane nensizakalo yethu yamakhasimende uma uthola ukuthi imininingwane yama-invoyisi ayilungile njenge-oda, i-Micro-Semiconductor.com izongena esikhundleni bese ithumela i-asap efanele.
Sicela uxhumane nensizakalo yethu yamakhasimende uma ufuna ukushintsha imininingwane ye-invoyisi, sizothumela i-invoyisi ebukeziwe ekhelini lakho elibonisiwe ngemuva kokuthi umnyango wethu wezezimali uqinisekisile.
Ngaphandle kwemvume yokuhlinzekwa kwamakhasimende, umnyango wethu wezezimali ngeke usamukele isicelo se-invoyisi ephinde yakhishwa evela ocingweni, ifeksi, i-imeyili.